Ihe ị ga-ahụ na Jaén: Ihe nketa na gburugburu ebe obibi | Akụkọ njem
Ihe ị ga-ahụ na Jaén
Louis Martinez | 10/01/2022 15:30 | Spain obodo, Nduzi
Ọ bụrụ na ị na-eche ihe ị ga-ahụ na Jaén N'ihi na ịchọrọ ịga na obodo Andalusian, anyị ga-agwa gị na ọ nwere nnukwu ihe nketa dị egwu. A kwadoro nke a n'ime ogologo akụkọ ihe mere eme ya, nke gụnyere, opekempe, site n'oge Iberia, dị ka ihe àmà na-egosi na ebe nkà mmụta ihe ochie nke oge ochie. Ugwu nke Plaza de Armas nke Puente Tablas.
Mgbe e mesịrị, Jaén ga-abụ isi obodo nke Ala-eze di nsọ ruo na narị afọ nke XNUMX. Ma, na mgbakwunye, obodo Andalusian dị na mpaghara nwere ohere, n'okpuru ala Ugwu Santa Catalina na ugwu Jabalcus, nke ị nwere ọtụtụ ụzọ ịzọ ụkwụ, na osisi oliv gbara ya gburugburu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ihe ị ga-ahụ na Jaén, anyị na-agba gị ume ka ị nọgide na-agụ ya.
1 Katidral nke mwere
2 Ụlọ arụsị ndị ọzọ na ụlọ okpukpe ị ga-ahụ na Jaén
3 Arab Baths na Obí nke Count nke Villardompardo
4 Obí ndị ọzọ ị nwere ike ịhụ na Jaén
5 Catlọ Santa Catalina
6 Onye Juu
7 Ụlọ ihe ngosi nka nke Iberian
8 Hospitallọ ọgwụ ochie nke San Juan de Dios
9 Ogige ntụrụndụ na gburugburu Jaén
Katidral nke mwere
Katidral nke Assumption na Jaén
Ọ bụ nnukwu ụlọ nsọ nke Dị Renaissance, ọ bụ ezie na ihu ya bụ otu n'ime ihe ịchọ mma nke Spanish Baroque. N'ịbụ nke akpọpụtara ihe ncheta omenala omenala, owuwu ya malitere na narị afọ nke XNUMX wee nọrọ ruo narị afọ ndị na-esote. Ọzọkwa, mgbe ala ọma jijiji ahụ gachara Lisboa, aghaghị iweghachi ya. Ma, ọ bụrụ na mpụta ya mara mma, ọ bụ ihe dị egwu karịa ihe ị nwere ike ịhụ n'ime ya.
Dị ka ihe atụ, neoclassical ukwe, nke bụ otu n'ime ndị kasị ibu na Spain, na isi ụlọ, ọrụ nke Andres de Vandelvira. Mana, karịa ihe niile, ị ga-agarịrị n'ime ụlọ relic nke Nsọ Ihu, tụlere ezi ihu Jizọs Kraịst. Ọ bụ akwaaji nke Veronica gaara eji mee ka ihu nke Onye-nwe kpọnwụọ n’oge agụụ mmekọahụ.
Ụlọ arụsị ndị ọzọ na ụlọ okpukpe ị ga-ahụ na Jaén
Basilica nke San Ildefonso
N'akụkụ katidral, ị nwere ọtụtụ ụlọ okpukpe ndị ọzọ mara mma na obodo Andalusian. N'ime ha, ndị Basilica nke San Ildefonso, nke ụdị Gothic na nke ahụ nwere ihe oyiyi nke Virgin nke Chapel, onye na-elekọta Jaén. Anyị na-adụ ọdụ ka ị gaa na chọọchị dị iche iche nke Saint mary magdalene, na Saint John Baptist, atụle ndị kasị ochie n'ime obodo, ma ọ bụ Saint Andrew, nke nwere ụlọ Ụlọ Nzukọ Nsọ, Ụlọ ekpere nke a raara nye maka echiche na-adịghị mma.
N'aka nke ọzọ, e nwekwara ụlọ ndị ebe obibi ndị a ga-eleta na Jaén. N'ime ha Royal Convent nke Santo Domingo, isi ụlọ ọrụ nke ugbu a nke Provincial Historical Archive. Facade ya bụ ụdị nke Mannerist ma nwee ụlọ ụka wuru na narị afọ nke XNUMX. Ma isi ihe ijuanya na ị nwere ike ịhụ na ebe obibi ndị mọnk a bụ cloister, na-ewere na ndị kasị ibu na obodo na nke iri isii Tuscan ogidi na iri abụọ na asatọ semicircular arches guzo pụtara.
Arab Baths na Obí nke Count nke Villardompardo
Ebe ịsa ahụ Arab nke Jaén
Obí ahụ, nke e wuru na narị afọ nke XNUMX, bụ ihe ịtụnanya Ntughari ohuru, ọ bụ ezie na e mere isi ọnụ ụzọ ya na narị afọ nke XNUMX. N'ime, patio nke etiti nke nwere ihe ngosi abụọ nke ogidi na-apụta ìhè na nke ọnụ ụlọ dị iche iche nke ụlọ ahụ meghere.
Ọzọkwa, na okpuru ulo nke obí ị nwere ike ịga na ochie Ebe a na-asa aru Arab, a na-ewere dị ka ndị kasị ibu echekwabara na Europe, na ya 450 square mita. Mkpakọrịta site na narị afọ nke XNUMX, ha nwere ọtụtụ ọnụ ụlọ a chọrọ mma na-esochi akwụkwọ nke Almoravid na Almohad art.
Ọ dịkwa n'obí Villardompardo, ụlọ ngosi ihe mgbe ochie abụọ ị ga-enwe mmasị ịhụ. bụ ndị Naive Art International, dabere na nchịkọta onye na-ese ihe Manuel Moralesna nke Arts na Popular Customs, nke nwere uru ethnographic dị mkpa.
Obí ndị ọzọ ị nwere ike ịhụ na Jaén
Obí nke Vilches
Villardompardo abụghị naanị ụlọ palatin ị nwere ike ịhụ na Jaén. N'ezie, anyị na-akwado ka ị ghara ileghara ihe dị oké ọnụ ahịa anya Obí nke Vilches, na ọmarịcha facade nke Renaissance; nke nke Viscount de los Villares ma ọ bụ Count-Duke, nke dị n'akụkụ ebe obibi ndị mọnk Baroque nke Santa Teresa de Jesús; nke Obí eze, wuru na narị afọ nke XNUMX na nke nwere nchịkọta dị mkpa nke eserese, ma ọ bụ Nnukwu ọnụ ụlọ obodo, nke sitere n'ike mmụọ nsọ nke gara aga, mana ọ bụ nnukwu nkume dị egwu nke ihe owuwu nke narị afọ nke XNUMX.
Mana, ikekwe, ụlọ mbụ kacha mara mma na Jaén bụ nke Constable Iranzo maka ụdị Mudejar ya dị egwu. Ihe atụ nke nlanarị nke nka Muslim mgbe mmeri Ndị Kraịst meriri obodo ahụ, ọ bụrụ na ị nwere ike, gaa na nnukwu ọnụ ụlọ ya na aljarfe ma ọ bụ uko ụlọ nwere osisi a pịrị apị. Ugbu a, ọ bụ isi ụlọ ọrụ nke Obodo Ọbá akwụkwọ.
Catlọ Santa Catalina
Nnukwu ụlọ nke Santa Catalina
O nwere ike ịbụ ihe ncheta kacha mara amara na Jaén. Ọ dị n'elu ugwu nke otu aha ma wuo ya n'oge ochie na foduru nke ebe ochie Arab ewu ewu. N'ezie, mgbagwoju nwere, na-esote ya, abụọ ọzọ enclosures: na Old Alcazar na m meghere, ọ bụ ezie na e wepụrụ akụkụ dị mma n'ime ihe ndị a iji wuo parador de turismo nke mba.
Ebe a na-edebe nnukwu ụlọ ahụ dị mita iri anọ n'ịdị elu ma n'ime ya nwere ebe ntụgharị okwu. Ma, nke ka nke, site na ya, ị nwere ọmarịcha echiche banyere Jaén na osisi oliv na ugwu ndị gbara obodo ahụ gburugburu.
N'otu aka ahụ, na otu, ndị Ụlọ ụka Saint Catherine nke Aleksandria, wuru n'etiti narị afọ nke XNUMX na XNUMX na ụdị Gothic, na Obe, nke dị na akụkụ kachasị elu nke ugwu na nke bụ akara nke obodo ahụ. N'ime ya ị nwekwara ike ịgụ sonnet mara mma nke onye na-ede uri Jaen dere Antonio Almond Aguilar.
Menorah nke ogige umu mgbei
Obodo ahụ nwere ọnụnọ Hibru ruo narị afọ iri na abụọ na okporo ụzọ ndị dị warara na ndị mkpọda nke mejupụtara mpaghara ndị Juu bụ akụkụ nke netwọk ahụ. Ụzọ nke Sefarad na-esote obodo ndị dị ka Córdoba, Ávila, Béjar ma ọ bụ Calahorra. A makwaara ya dị ka Crugbè Santa Cruz na, n'etiti ụlọ ya pụtara ìhè bụ ụlọ Ibn Shaprut, Carnicerías, nke dị n'okpuru ebe ịsa ahụ Naranjo, menorah na Plaza de los Orfanos na foduru nke ọnụ ụzọ ámá Baeza, otu n'ime ọnụ ụzọ mgbidi ahụ.
Ma eleghị anya, ihe kacha pụta ìhè na mpaghara a bụ Ebe obibi ndị mọnk Royal nke Santa Clara, narị afọ nke XNUMX. Dị ka ọchịchọ ịmata ihe, anyị ga-agwa gị na ndị inyom na-aga ịlụ na-enye ndị nọn Poor Clare akwa ka ha wee nwee obi ụtọ n'ụbọchị agbamakwụkwọ ha.
Ụlọ ihe ngosi nka nke Iberian
Iberibe ihe ngosi nka nke Iberian nke Jaén
Ọ bụ nleta ọzọ dị mkpa na Jaén, dị ka ọ dị nchịkọta kasị ukwuu nke nkà Iberian n'ụwa. Nwere iberibe sitere na saịtị ihe ochie na mpaghara niile. N'ime ha pụtara na nke Tablas Bridge, nke anyị kwuburu. Mana ha enyewokwa ọtụtụ ihe ndị nke Egwuregwu ọcha na Porcuna, site na Castulo na Linares, si Ugwu Nnụnụ na Huelma ma ọ bụ nke Ụlọ Nche n'ebe ewusiri ike nke Eze.
Hospitallọ ọgwụ ochie nke San Juan de Dios
Cloister nke ụlọ ọgwụ de San Juan de Dios
Anyị ga-emecha njem anyị n'obodo ahụ n'ụlọ a mara mma nke e wuru na narị afọ nke XNUMX wee gaa n'ihu ịgwa gị banyere gburugburu Jaén. Ọ pụtara n'ihu maka facade nke Gothic oge ya na patio nke Andalusian Renaissance mara mma, nke edobere ya na isi iyi etiti. N'akụkụ ụlọ ọgwụ, ị nwere ike ịhụ a uka eweghachitere, mana ọ na-ejigide facade nke narị afọ nke XNUMX.
Ogige ntụrụndụ na gburugburu Jaén
Alameda de los Capuchinos na Jaén
Dị ka anyị kwuru, obodo Andalusian nwere ohere dị mma na gburugburu mara mma nke ukwuu ebe ị nwere ike ime ka ọ dị ụtọ. ụzọ ụkwụ na ịnya igwe kwụ otu ebe. N'ime ha nke na-agafe na ugwu Jabalcus, bụ́ nke anyị kwuwororịị nke na-aga n’agbata osisi pine na osisi oliv. Ọ bụrụ na ị na-eje ije na ya, ị ga-ahụkwa ụlọ nke spa ochie na ubi ya, otu ụlọ ndị nwere nnukwu ụkpụrụ ụlọ wuru na mmalite nke narị afọ nke XNUMX.
Ụzọ nke na-agafe obodo ochie ahụ na-enyekwa ọmarịcha ala Mgbidi obodo ochie, nke na-eduga na mpaghara ntụrụndụ nke Chimba Cross, ebe enwere klaasị okike, na nke na-aga Oke ọhịa pine ọ bụla, nso nnukwu ụlọ nke Santa Catalina.
Otú ọ dị, ọ dịghị mkpa ka ị hapụ Jaén ka ị nwee mmasị n'okike. Obodo nwere ọtụtụ ogige ntụrụndụ, ọtụtụ n'ime ha, na mgbakwunye, mara mma nke ukwuu. Ikekwe ihe kachasị mma bụ Alameda de Capuchinos, nke malitere na narị afọ nke XNUMX ma nwee ogige ụdị Renaissance na ụzọ etiti e mere maka ịnya ụgbọ. Nnọọ ya nso bụ Convent nke echiche Franciscan ma ọ bụ de las Bernardas, nke e wuru na narị afọ nke XNUMX.
Nke ogige Concordia, nke dị n'akụkụ nke ncheta nke agha, nke a raara nye ndị Las Navas de Tolosa na Bailén nke onye na-ese ihe si Jaén mere. Hyacinth Higueras na 1910.
Ma eleghị anya, ogige ntụrụndụ kasị dị egwu na Jaén bụ nke Andrés de Valdenvira nke, ya na otu narị puku square mita, bụ nke kachasị na Andalusia nile. O nwere ihe karịrị puku ụdị osisi abụọ, ọdọ mmiri, isi iyi, ihe nkiri amphitheater na ọbụna egwuregwu bọọlụ. Ọ bụ isi ngụgụ nke obodo yana oghere ebe ị nwere ike ịme mmemme egwuregwu.
N'ikpeazụ, anyị agwala gị gbasara ya ihe ị ga-ahụ na Jaén. Dị ka ị hụla, obodo Andalusian na-enye gị ọtụtụ ebe nkiri. O nwere ihe ncheta mara mma, ọdịdị nwere oke na ọtụtụ ihe nkiri. Banyere nke a, na mgbakwunye, ị nwere ike ịnụ ụtọ a ọmarịcha gastronomy na nke ọtụtụ mpaghara tapas, ihe ochie na Jaén. N'ime efere ndị a na-ahụkarị nke ị nwere ike ịnụ ụtọ n'obodo Andalusian, e nwere nri dị ụtọ dị ka salad ose a ṅara n'ọkụ, pipirrana, akwụkwọ nri asparagus nke Jaén, agwa na stew aubergine ma ọ bụ cod na yabasị. Na-echefughị ​​sweets dị ka pestiños, alfajores ma ọ bụ ochíos. Ịchọghị ịnụ ụtọ isi obodo Andalusia a mara mma?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Ihe ị ga-ahụ na Jaén